KITRA AMINA TORA-PASIKA :: Hanainga, anio ho any Ejypta, ny Barea Beach Soccer • AoRaha
KITRA AMINA TORA-PASIKA Hanainga, anio ho any Ejypta, ny Barea Beach Soccer
Lasa ihany. Raha mbola nanjavozavo, iray volana lasa izay, ny mety ho fandraisana anjaran’i Madagasikara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika taranja baolina kitra lalaovina amina tora-pasika na “Can Beach Soccer” dia hanainga anio ihany izy ireo. Hotanterahina any Ejypta amin’ny 8 – 13 desambra ho avy izao ity fifaninanana kaontinantaly efa nahazoan’i Mada- gasikara ny anaram-boninahitra, tamin’ny andiany voalohany ity. Andiany fahatelo izao hotanterahina any amin’ny firenen’i Faraona izao.
Mpilalao roa ambin’ ny folo no mandrafitra ny delegasiona tarihin’i Benony Jacques, mpikambana ao amin’ny komity vaovaon’ny Federasiona. Saika ireo mpilalao efa nisalotra ny anaram-boninahitra tamin’ny taona 2015 ny ankamaroan’izy ireo. Isan’ireny ry Jhorialy sy Tsiliva ary Ymelda. Misy ihany koa ireo efa tao anatin’ny ekipam-pirenena foana toa an-dry Angéluc, Enidiel sy ireo maro hafa.
Hiray vondrona amin’i Ejypta (mpampiantrano), Maraoka ary Côte d’Ivoire, ny Barean’i Madagasikara, amin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. Hifanintsana eo amin’ny vondrona B kosa i Sénégal, Nizeria, Lybia ary Tanzania.
I Côte d’Ivoire no hihaona voalohany amintsika, amin’ny alahady 9 desambra izao. I Ejypta sy Maraoka kosa no hanohy izany, amin’ny alatsinainy 10 sy talata 11 desambra.
Aorian’io dia hiatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana ireo ekipa valo mandray anjara, mialoha ny hanohizana amin’ny dingan’ny manasa-dalana sy famaranana.
BADMINTON – FIFANINANAM-PIRENENA :: Mpilalao sivy amby fitopolo hiady anaram-boninahitra fito
MOTOCROSS – MX ANTSIRABE :: Hifandona any Antsirabe i Claudio sy Ranty